International – Live Nepal News
आमाको शव फ्रिजमा राखेर तीन बर्षदेखि पेन्सन !
April 9, 2018	International 0
भारतमा एक व्यक्तिले आमाको शव तीन वर्षसम्म फ्रिजभित्र लुकाएर राखेको पाइएको छ । छिमेकी र नातेदारले समेत थाहा नपाउनेगरी आमाको शव फ्रिजमा राख्नुको कारण भने अचम्मको छ । कोलकाताका शुभव्रता मजुमदारले अरु कारणले नभई आमाको नाममा राज्यले दिने पेन्सन खानका लागि शवलाई फ्रिजमै राखेका हुन् । आमाको शव सड्नबाट जोगाउन …
के छ कोरियामा जसका कारण नेपाली युवाहरु स्वदेश फर्कन चाहदैनन
April 6, 2018	International 0
Share डेल्धुराका रमेश महरा (नाम परिवर्तन) अविवाहित हुन कोरिया आएको चार बर्ष भयो तर उनी छुट्टीमा एकपटक पनि नेपाल गएका छैनन् । कोरियाको बुछन सिटीको एक प्लाष्टिक कम्पनिमा काम गर्ने उनले मासिक नेपाली दुईलाख चालीस हजार सरदर कमाउँछन तर उनले कोरिया आएर धेरै पैसा यौन मस्तीमा उडाए । महिनामा कम्तिमा …
सलमान खानलाई ५ वर्षको जेल सजाय, लिइयो हिरासतमा
April 5, 2018	International 0
भारतीय अभिनेता सलमान खानलाई ५ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । कालो हरिणको शिकार गरेको मुद्दामा उनलाई जोधपुर अदालतले बिहिबार सो सजाय सुनाएको हो ।सलमानलाई तत्कालै हिरासतमा लिइएको छ । उनलाई सेन्ट्रल जेलमा लगिने छ । उनले ३ वर्षसम्मको सजाय पाएको भए धरौटीमा छुट्न सक्ने थिए । तर, सोभन्दा बढिको …
आफ्नै छोरीको टाउको काटेर मासु खाँदा खाँदै आमा ( प्रमिला ) पक्राउ
जन्मदिनेै आमाले आफ्नै छोरीको शरीरका अंगहरु काटेर खाएको तपाईले कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? भारतकी एक आमाले भने हिंस्रक ब्यबहार देखाउँदै दुई वर्षीया छोरीको अंगहरु काटिरहेकी छिन् । ति महिला हुन् ४० वर्षीया प्रमिला मण्डल । जो एक ‘जँड्याहा’ आमाको नामले पनि परिचित छिन् । दुई वर्षीया बालिकाको अंगलाई काटिरहेको, ताछिरहेको …
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित यूट्यूब मुख्यालयमा आक्रमण, संदिग्ध महिलाको मृत्यु
April 4, 2018	International 0
बीबीसी। अमेरिकाको उत्तरी क्यालिफोर्नियास्थित यूट्यूब मुख्यालयमा आक्रमण भएको छ। एक बन्दुकधारी महिलाले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा चार जना घाइते भएका छन् भने आक्रमणकारी महिलाले आफैंलाई गोली हानी आत्महत्या गरेको बीबीसीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार गोलीबारीका घाइते चार जनाको उपचार भइरहेको छ। उनीहरुको अवस्थाका बारेमा केही जानकारी दिइएको छैन। सो आक्रमणका …
केमेस्ट्रीको परीक्षामा विद्यार्थीले प्रेमपत्र लेखेपछि…
April 3, 2018	International 0
प्रेममा मानिसले के सम्म गर्दैन ? कहिले समुद्र पार गराउँद छ त कहिले आकाशमा उडाउँछ । कहिले पहाड काटेर बाटो बनाउँदछ त कहिले प्रियतमको प्यास मेटाउन कुवा खनाउँछ । तर यी व्यक्तिले प्रेमका खातिर जे गरे, त्यो झनै रोचक छ । भारतको उत्तर प्रदेशका एक किशोरले रसायन विज्ञानको परीक्षामा उत्तरपुस्तिकामा …
बिहे गर्न भगाएकी प्रेमिकाको लाश लिएर प्रेमी प्रहरी चौकी पुगेपछि…
बिहे गर्नको लागि आफ्नी १७ वर्षकी प्रेमिकालाई भगाएका युवक उनै प्रेमिकाको लाश लिएर प्रहरी चौकी पुगेपछि हंगामा भएको छ । प्रहरीले ती युवकलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । भारतको हरियाणाको सिरसा जिल्लाको एलनाबाद थानामा ती युवक शनिबार प्रेमिकाको लाश लिएर पुगेका हुन् । राजस्थानको श्रीगंगानगरका जोगिन्दर सिंह नामका ती …
६० लाख नेपालीको भावना बोल्ने एउटा फोटो हेर्दै आँशु झर्छ ! छोरालाई विदाई गर्दै वृद्ध बा !
April 1, 2018	International 0
यो तस्वीर हेर्दा सामान्य छ तर देश, काल, परिस्थिति र जीवनलाई जब गम्भीर भई बुझ्न मन लाग्छ, त्यति बेला यसले मनमा भक्कानो फुटाउँछ धरधरी रुवाउँछ । हाम्रा सबै बाहरूको अवस्था यही हो यी फोटामा भएका बाको जस्तै । लुटेराहरूको हातमा सत्ता छ । शैद्धान्तिक शिक्षाको सर्टिफिकेटले मजदुरी गर्न नि सकिन्न …
धेरै चर्चित भएको भन्दै विद्यार्थीलाई स्कुल छोड्न आदेश
March 22, 2018	International 0
आइस व्वाई’ को नामले चर्चित एक चिनियाँ बालकलाई उनी पढ्ने विद्यालयले निस्कन दवाब दिएको छ । उनको अन्तर्वार्ता लिन दिनदिनै मिडियाको ओइरो लाग्नाले दिक्क भएर प्रधानाध्यापकले उनलाई स्कुल फेर्न भनेका हुन् । आठ वर्षीय बालक वाङ फुवान घरबाट टाढा रहेको झुआन्सान्बाओ स्कुलमा परीक्षा दिनका लागि ठण्डीमा कयौं माइल हिँड्नु परिरहेको …
झ्याल फोडेर हामफालेकी बंगलादेशी अहमदले भनिन्, चाँडो उद्दार नभएको भए कहाँ बाँचिन्थ्यो र?
March 21, 2018	International 0
बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट बिदा मनाउन काठमाडौं आएकी साहसी अहमद अहिले केएमसी अस्पतालमा छिन्। सोमबार दिउँसो युएस बंगला एअरको विमानमा काठमाडौं आएकी उनी दुर्घटनामा परेपछि अस्पतालमा भर्ना भएकी हुन्। आफू बाँचेकोमा उनले सबैभन्दा पहिले नेपाली उद्दारकर्मीलाई धन्यवाद दिएकी छिन्। ‘ यति चाँडो उद्दारकर्मी र अग्नि नियन्त्रक आईपुगे कि जसले गर्दा म …